रोजगार :: OnlineKhabar.com - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview
६ असोज, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सदस्यहरुले बलबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा रहेको वर्तमान कार्यसमिति भंगको माग गर्दै आज काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन गरेका छन् । असन्तुष्ट पक्षले ७५ प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रशासनमा...
वैदेशिक रोजगार ठगीका फरार लामा पक्राउ
४ असोज, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ठगीमा अदालतबाट सजाय फैसला भई फरार रहेका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काभ्रे फलाटे ७ का २८ वर्षीय पेमा लामालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको...
२८ भदौ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई दुःख दिने कुनै पनि निकायलाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधिसँग आज बिहान भएको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष रेग्मीले...
२८ भदौ, खोटाङ । कम्पनीले सम्झौताअनुसारको काम र तलब नदिएको भन्दै मलेसियाबाट खोटाङका एक व्यक्ति स्वदेश फर्किएका छन् । कार्यरत कम्पनीले सम्झौताअनुसारको काममा नलगाएको र मासिक तलब नदिएको भन्दै खोटाङको नेर्पा-६ का कृष्णप्रसाद रिजाल स्वदेश...
चितवनकी ठूलीमायाले पाइन् आईएमईको टिभी
१४ भदौ, काठमाडौं । चाडवाडको अवसरमा आईएमईले सुरु गरेको दसैंमा SLC योजनाअन्तर्गत पहिलो टिभी विजेता घोषणा भएको छ । भादौ १ देखि शुरु योजनाको पहिलो साप्ताहिक विजेता चनाउली चितवन निवासी आईएमईका सेवाग्राही ठूलीमाया ब्लोन...
१३ भदौ, काठमाडौं । श्रम स्वीकृति लिएर जायज रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका कामदारलाई बीना कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागले फर्काइदिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्ययवसायीहरु त्यसको प्रतिकारमा उत्रिने भएका छन् । व्यवसायीहरुले फर्काइएका कामदारलाई...
पहिलो दिनमै कोरियाका लागि १८ हजारको आवेदन
५ भदौ, काठमाडौं । कोरियन भाषा परिक्षाका लागि पहिलो दिन नै १७ हजार ८ सय २४ जनाले आवेदन दिनएका छन् । इपिएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया काम गर्न जान इच्छुक यूवाहरुका लागि सरकारले बुधबारदेखि आवेदन...
इपिएस परिक्षा फारम भर्न यूवाहरुको भिड (भिडियोसहित)
५ भदौ, काठमाडौं । इपिएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया काम गर्न जाने युवाहरुका लागि आजदेखि भाषा परिक्षाको फारम खुल्ला भएको छ । फारम भर्नका लागि राजधानी र राजधानी बाहिर रहेका केन्द्रहरुमा यूवाहरुको ठूलो भिड लागेको छ...
श्रमिकले उद्योग बन्द गराएपछि उद्योगी सरकारको शरणमा
२२ साउन, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हेटौंडा र वीरगञ्ज क्षेत्रमा ट्रेड युनियनहरुले गराएको उद्योग बन्दप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार श्रममन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेसँग भेट गरि महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न माग राखी उद्योग...
‘उद्योग धराशायी बनाउन सरकार-संचालक दुवै जिम्मवार’
१९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले उद्योगहरु धराशायी हुँदा गम्भीर रुपमा ग्रहण नगर्ने सरकार र संचालक दुवै दोषी रहेको ठोकुवा गर्नुभएको छ । । नेपाल व्यापार संघको २२ औं वाषिर्क...
१४ साउन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको मीठो सपना बुनेर थाइल्याण्ड पुगेका १४ नेपालीहरु दलालका कारण दुई महिनासम्म अलपत्र परेर स्वदेश फर्केका छन् । स्वदेश फर्किएका उनीहरुले त्यहाँ अरु पनि नेपाली नागरिकहरु समस्यामा परेको भन्दै...
१३ साउन, काठमाडौं । अलेक्जेण्डर महानले भनेका छन् कि मेरो लास लैजाँदा दुवै हात बाहिर राखिदिनु । सबैले देखून् र भनून् संसार जित्ने अलेक्जेण्डर रित्तो हात जाँदैछ । अलेक्जेण्डरको भनाइ पछ्याएका त होइनन् होला...